Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? - [International Consulting]
> Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense?
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Ad network rese mediated via Ezoic
Nzira yekubhadhara bhaji pasina AdSense
AllFeeds nguva dzose kukurudzira kugoverana sendima
Media.net: Kugadzirisa kweChetekisi uye Programmatic Platform
Anozivikanwa, Mutungamiri muMunhu Akashambadzira Kudhinda
Criteo: Chiziviso chekubudisira Indaneti
Ezoic - Website Intelligence Platform For Publishers
Smaato: Mobile Advertising uye App Monetization Platform
IPONWEB - Global Leader mu Real-Time Advertising Technology
Kiosk - Kutanga Kuita mari yako yepaIndaneti neChiosked
Teads: Global Media Platform
Vanhu vakawanda vatanga kushandisa hurongwa hweGoogle yeAdSense, asi pane vamwe vanozviona zvisingabvunziki kana kuti kwete kukodzera zvavanoda ivo kubva purogiramu yekuzivisa.
Izvo zvingaita, neruremekedzo kune vanhu vakadaro, kune nzira dzakasiyana siyana dzeAdSense dzinoedza kujekesa chikamu chekukundikana kwayo. Heino rwizi rwematambudziko makuru kubva kune rumwe rutivi uye dondedzero pamusoro peumwe neumwe.
Chisarudzo chedu: Ezoic, iyo ichazowana iwe iwe chinonyanya kukosha chinopiwa chekuzivisa, nenzira iyi kuwedzera mari yako.
Kuwedzera kwekuwedzera kunowanikwa 50-250% neEzoic. A Google Certified Publishing Partner.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Zvibereko zvinowedzera neEzoic kupindirana
AllFeeds ine dzimba rinoshamisa revashandi vepaIndaneti kutarisa. Izvo zvinowedzerawo zvinosanganisira mharidzo mizhinji yaunogona kutarisa. Izvi zvinosanganisira pennants, kubata, XML inotsigira, DHTML pop-ups, nezvimwewo. Inowedzera inosanganisira nguva dzose kudondedzera kwekusimudzira kwako nzvimbo. Nzvimbo iyi inotumira tsamba chekuongorora mwedzi wega wega, yakapa kuti iwe uwane zvakanyanya zvekare $ 25.00, uchifambisa mari kune mwedzi unotevera pangozi yekuti iwe hauiti. Chimwe chinhu chinonakidza pamusoro peAllFeeds ndechekuti inosanganisira neGoogle AdSense, ichiwedzera mari yako neAdSense.
Allfeeds | CHOKWADI-NENGUVA YOKUDZIDZISWA KWOKUDZIDZA PLATFORM YEVAPARIDZI
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Allfeeds website
Media.net inokubvumira imwe yenzira ine mutsa kuisa kukosha kwewebsite yako. Izvo zvinowedzera kuti iwe ubvumire kana kubvisa chero hutano hunoonekwa pane yako nzvimbo (pasinei nokuti AdSense pachayo inopedza basa rakakura zvikuru yeizvi zvakare, neIndaneti mitsara) Panewo zvikamu zvezviyero zvinokubatsira kuti uone kuti zvakanaka sei site iri kuenderera mberi. Izvo zvinyorwa zvishoma zvakangoita seAdSense uye ivo zvakafanana sezviri nyore kuisa. Saizvozvowo, kunyora kwaMedia.net kwave kusununguka.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Media.net website
Kuzivikanwa kunopesana nezvikonzero izvo zvinotsigira kuti zvive zvichitsvaga pawebsite yako, iyo iyo yakarongeka kuti ibudise iyo inoshamisa zvikuru inofanirwa kubatsirwa kwejiji rako. Iyo inowedzera ine dziva guru revanokurudzira rinovimbisa kune vanhu vakawanda kuti vatore nzvimbo yako. Izvo zvingaita, zvinoda kuwedzera kuchenesa zvinhu zviri pedyo neAdSense. Sezvo nzvimbo dzakawanda dzinowanikwa, pfungwa dzinopfuurira dzinosvikeka uye dzakananga kutanga nehutungamiri, asi kune rumwe rutivi zvinyatsogadziriswa.
Anoziva | Mutungamiri muMunhu Akashambadzira Kudhinda
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Webusaiti inotaurirana
RealContext inoshandisa mazano ekugadzirisa kuti awane zvakakosha zvakakurudzirwa peji rako. Uyezve, pane chimwe chikamu chinoita kuti RealContext inoshamisa zvakare. Catchphrases vanosarudzwa vanovimbiswa pane zvipi zvekare zvakagadziriswa uye izvo zvisingaiti. Icho chinoreva kuti pane kutsoropodza kusingagumi kunoita kuti iwe uwedzere mari iri nani kubva pane zvaunokurudzira. Izvo zvinowedzera zvigadziri kudzivirira vamwe zvinosanganisira uye tyke zvakachengetedzeka zvakachengeteka uye zvakawanda zvakasarudzwa.
Chitika - Online Advertising Network - Iyo ruzivo runotungamirira mberi
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Chitika website
RhythmOne inonyanya kugoverwa zvakagadzirwa nemagetsi ekugadzirwa. Sezvo neAdSense, zvikwata zvinotarisirwa asi hazviregi pano nenzira ipi zvayo. Zvokugadzirisa zvinonyatsogadziriswa, unogona kusarudza kubva kune zvakashambadzirwa zviziviso, mapegi, maumbirwo emakona, pop-ups, pop-unders kana kubuda kwakakwirira. Iwe unogonawo kuratidzira zvaunofambisa, kuburikidza nekuvandudza, zvose pawebsite yako uye pane dzimwe nzvimbo dzinobatsira, izvo zvinoita RhythmOne kusanganiswa nekuzivisa nguva dzose kufambira mberi. Pane zvakanyanyisa zvakanyanya pa-line inoramba ichijekesa chinhu uye, seinojairika nehurumende dzakadai, kutanga ndokusununguka uye iri mhepo.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : RhythmOne website
Komoona ine zvakasiyana-siyana zvinogadziriswa zvikwata zvekusimudzira, izvo iwe unogona kuzvigadzirira iwe nekunyoresa kushandisa pa-in-line interface. Iwe iwewo unotora nguva chaiyo kuzarura nekunyorera--maundi, peji uye referer. Pane kubatanidza neGoogle AdSense zvakare, kuburikidza neGoogle_alternate_ad_url saka Komoona inogona kushandiswa sechinotsiva Google PSA's (Public Service Ads).
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Komoona website
Sovrn yekubudisa inoita kuti vatengesi vawane zviziviso zvakanzwisiswa nedzimwe nyaya kana zvikamu, uye kwete chechirongwa chemashoko chinowanikwa pane zvinyorwa. Nzvimbo iyi inowedzera zvikwata zvinoparadzanisa nzvimbo nevanokurudzira neruoko kuti vatsigire mari yakawanda inogadzira zviziviso. Uyezve, kutaura pamusoro pekuwana mari, chiyero chemari yaunowana inenge hafu yepamusoro yekupa kwechiyero chemari Sovrn inowanikwa kune mutori wenhau.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Sovrn website
Criteo inorongedzwa zvakanyanya kune zvinodhaka zvinoshandiswa. Inopa simba rose pamusoro pekutarisa zviziviso, zviyero pamusoro pekushandiswa kwewebsite yako nekuwana mari iri nani. Inobvumirwa kunyora uye iwe unokunda yakavimbiswa 60% yemari yakazara. Iwe unogona kuwana kuribhadhara ne Paypal yeBhenki checks uye (nguva zhinji) kutengesa kwetambo zvakare.
Criteo: Kukurudzira nzvimbo yeIndaneti yakazaruka
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Criteo website
Ezoic ichakupa zvakanyanya se 60% kubva pachiyero chemari yako nzvimbo yako inobereka. Zvaunowana zvinopfuura kuAdSense, unogona kuona zviripo kubva panzvimbo yako kukura zvishoma nezvishoma. Iwe unogona kuwana mari kuburikidza nePayPal kana kuburikidza nehoki nguva dzenguva dzose, wakapa kuti iwe wakagamuchira zvakanyanya kusvika $ 50. Muchiitiko chausina kumboita zvakawanda, kukunda kwako kunopfuurira kune nguva inotevera.
Kuwedzera kwakashambadzirwa kune 50-250% neEzoic. A Google Certified Publishing Partner.
The Trade Desk | Nzira yakajeka yakajeka pamusoro pekusimudzirwa mberi
Kufanana neAdSense, The Trade Desk inoratidza kukurudzirwa kwezvinhu zviri papeji yako. Chero zvazvingaitika, kusiyana kunowanikwa munzira iyo vatapi venhau vanopa pamusoro pekusimudzira nzvimbo yako, zvichivimbisa kuti iwe unowana mari yakawanda sezvaungagona. Izvi zvinowedzera zvinopiwa zvichawedzera shure kwechinguva, kukunda iwe mari yakawanda. Iwe iwewo unowana nzira inoshamisa yekugadzirisa zvikwata zvako nekunyoresa kushandisa shanduro uye nitty gritty mibiko panzvimbo yema site yako.
The Trade Desk | Nzira yakajeka yakajeka pamusoro pekupfuurira mberi kuzivisa
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : TheTradeDesk site
Smaato anozadzisa kukosha kuburikidza nekuisa mureza sezvinoratidzwa newebsite yako. Izvo zvinokupawo pamishumo ye-line yehutano hwesaiti yako uye mukana wekuisa mazita ako zvipikiso zvetsika kubvisa zvinyorwa zvisingakutore iwe chero upi zvake. Kugadzirisa kunokosha, zvakafanana neAdSense uye kunogadziriswa zvakare. Inoshandiswa uye inoshandiswa uye inoshandiswa.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Smaato site
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : TripleLift site
IPONWEB zviitiko kuti uchengetedze innovation iyo inogona kushandura uye inzwisise webpage yako, kuipa simba iyo kuratidza chinhu chinonyanya kushandiswa pawebsite yako. Zvimwe kunze kwehuwandu hwekugadzirwa, IPONWEB inosimbisa kukosha kwekuregererwa kunyoresa sezvinorarama pedyo nehupfumi. Chimwe chinhu asi zvakaoma kuita uye ine unhu hwakanaka hwekutengesa zvakare.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : IPONWEB site
OpenX inotarira kune vashoma uye vanoenzanisa vashambadzi vakaenzana. Iyo inogadzirisa Bhokisi rekutsvaga rubatsiro uye nekuwedzera rinosanganisira zvinhu zvakadai seChechi Rakafanana sekurapa kwemajiji 404 ekukanganisa. Izvo zvakanaka zvingave zvakarongedzwa nejiji rako uchishandiswa kwekutanga pane-wizard wizard.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : OpenX site
Kiosk inokupa chimwe chinhu chinokosha 65 muzana chezvainokonzera kubva kune chinyorwa panzvimbo yako. Mafungiro anoitwa mwedzi mwedzi, achishandisa PayPal kana kuburikidza nekuongorora. Izvo zvinokurudzirwa zvinogona kugadzirwa sezvaunoshuva, uye Kiosk iyo inopa kunyange rubatsiro rwekubatsira rusununguko kuvanhu vayo uye hapana mhaka inotarisirwa kunyoresa nehutungamiri.
Trion Interactive inopa mikana yezvizivo zvinonzwisisika pamapeji ane simba, izvo zvinoreva kukurudzirwa kuchachinja kana peji rako richiita. Chinhu chipi zvacho kunze kwekuoma kushandisa uye kubvumirwa kuimirira uye kunopa chirongwa chakakwana chekugadzirisa. Zviziviso zvakanyatsogadziriswa uye mishumo inopfuurira inosvika pamaminitsi ose ezuva rimwe nerimwe.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Trion intuitive site
Teads inopa vanhu vanogovera mukana wekubatanidza zviziviso zvakagadzirwa mumapeji avo. Izvi zvinogadziriswa pachedu, uye nzvimbo dzaunofarira nemaoko saka dzinobudisa mifananidzo shoma nekurudzira hurongwa. Iwe iwewo unosarudza kusanganisira "Your Add Here" inobata kuti vatengi vanogona kukurumidza kusvitsa kududzira nzvimbo pane peji rako. Iyo inogonawo kushandiswa yakabatana neGoogle AdSense, kuwedzera CTR yako uye kupa vatsigiri mikana yekuratidza kushamwaridzana kwavo muGoogle AdSense nzvimbo. Iwe une simba rakazara pamusoro pekutarisa uye kunzwa kwako kunosanganisira pakupedzisira, iwe unowana anoshamisa 75% yezvinhu izvo mutengi anokweretesa pane imwe nyoka.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Teads: Global Media Platform
Nokudaro, sekufanirwa kuve pachena kune mazano akawanda ekukurudzira uku, uye akawanda crossovers anoenderana neAdSense sekuzivisa. Saizvozvowo, tani yehutungamiri inogona kushandira pamwe neAdSense kukuwana iwe zvakanyanya kukosha kwekuwana mari yako yekuzivisa nzvimbo.
Zvatinosarudza kunyange zvazvo zviri Ezoic, izvo zvinoita kuti mukwikwi uite pakati pevaya vose vanobatana navo.
Ndeipi nzira yakanakisisa yeAdSense? : Kuwedzera kwakashambadzirwa kune 50-250% neEzoic. A Google Certified Publishing Partner.
AdSense mamwe, advertising advertisement, online advertising, kuita mari webhusaiti, iyoic advertisement kududzira, blog mabhanga, pfuma mari paIndaneti,